‘डान्स प्लस–२’ को उपाधि जित्ने कुरामा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
मेरो अहिलेको तयारी उपाधिकै लागि हो । यहाँसम्म आइपुग्न जति मेहनत गरेको छु, अहिले त्यो मेहनतलाई दुई गुणा बढाएको छु । वास्तवमा अडिसनदेखि प्रतियोगिताको उत्कृष्ट ६ सम्म आइपुग्नुलाई नै मैले एउटा ठूलो सफलता मानेको छु ।
प्रतियोगितामा अडिसन दिने क्रममा यो सफलताको आशा गर्नुभएको थियो ?
अडिसनबाट प्रतियोगितामा छनौट हुनु नै ठूलो कुरा थियो । उत्कृष्ट ३० मा छनौट भएपछि भने म उपाधिको धेरै नजिक पुगेको छु भन्ने सोचेर धेरैभन्दा धेरै मेहनत गरेँ । आजसम्म पनि त्यो मेहनतलाई निरन्तरता दिइरहेको छु ।
डान्स प्लस–टुमा तपाईंले पाउनुभएको हालसम्मको सफलताको रहस्य के हो ?
मेरो अहिलेसम्मको मेहनत, नृत्यलाई आकर्षक शैलीमा प्रस्तुत गर्ने मेरो आफ्नै तरिका तथा निर्णायकहरूको मन जित्न सक्नु नै मेरो सफलताको रहस्य हो ।
प्रतियोगिता कत्तिको प्रतिस्पर्धात्मक छ ?
शतप्रतिशत प्रतिस्पर्धात्मक छ । भारत आफैंमा एउटा विशाल देश हो । मैले भारतभरका उत्कृष्ट डान्सरहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपरिरहेको छ । वास्तवमा यो प्रतियोगिता अत्यन्त ‘टफ’ छ ।
टप सिक्समा पुगेपछि भोट माग्न नेपाल आउने कुरा थियो नि ?
टप सिक्समा पुग्न सफल सबै ६ जना प्रतिस्पर्धीको टुंगो लागेपछि स्टार प्लसले हामीलाई आ–आफ्नो सहर पठाउने कुरा भनेको छ तर त्यसको ठ्याक्कै मिति तय भैसकेको छैन । मिति तय हुनेबित्तिकै फेसबुकमार्फत म सम्पूर्ण शुभेच्छुक तथा प्रशंसकहरूलाई यो कुराको जानकारी गराउनेछु । नेपाल आएर भोट माग्नु त अनिवार्य नै छ ।
नेपालबाट तपाईंलाई कसरी भोट गर्न सकिन्छ ?
अनलाइन भोटिङ गर्न सकिनेछ, तर त्यसका लागि अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ । अनलाइन भोटिङ प्रारम्भ हुनेबित्तिकै म यो कुरा सार्वजनिक गर्नेछु ।
(मुम्बईमा रहेका सुशान्तसँग टेलिफोन वार्ता)